အငယျဆုံးလေးတှဆေိုတာ – Shinyoon
အငယျက အငယျနရောနဆေိုတဲ့ စကားတှနေဲ့ ပွောစရာစကားတှကေို မွိုသိပျပဈရတာလဲ မြားပါတယျ အစစအရာရာ အရငျဦးဆုံးရလိမျ့မယျလို့ ထငျတတျကွတာ ကိုယျပူဆာခှငျ့မရခဲ့တဲ့အရာတှမှေ အမြားကွီးပဲ အရာအားလုံးမဟုတျပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားပါ
ပွီးတော့ . . . မိသားစုအပျေါ ပိုပွီးတှယျတာတတျတဲ့စိတျလေး ပါလာတတျကွတယျ ကိုယျဖွဈခငျြနတောတှထေကျ မိသားစုကို ပိုပွီးငဲ့ကှကျတတျကွတယျ အငယျဆုံးဆိုတော့ အငယျဆုံးတှရေဲ့သဘာဝအတိုငျး အနညျးအကြဥျးတော့ ဆိုးခငျြကွတာပေါ့
အဲ့တာ မတှယျတာလို့မဟုတျဘူး ဂရုစိုကျမှုလေးတှေ လိုခငျြလို့ ရမလာတဲ့အခါ ဂရုစိုကျလမေလားလို့တှေးပွီး ဆိုးကွတာအိမျတဈအိမျမှာ ရှိလရှေိ့တဲ့ စုနျးပွူးလေးတှကေ အငယျဆုံးလေးတှကေမြားတယျ
ဥပမာ – အဈကိုက ဆရာဝနျ အမလဲ ဆရာဝနျ အငယျဆုံးလေးတှမှေ အဝေးသငျတကျနသေလိုမြိုးတှေ တဈမိပေါကျ ထှနျးတာမြိုးတှပေေါ့ သာမနျအထငျတှေ အမွငျတှနေဲ့ဆုံးဖွတျကွတဲ့အခါ အငယျဆုံးတှကေ ပိုပွီးဆိုးတယျလို့ တှေးတတျကွတယျ
နောကျဆုံးမိသားစုအနားမှာ ကနျြခဲ့တာကလဲ အငယျဆုံးလေးတှပေါပဲ ကွိုကျသလောကျဆိုးခငျြဆိုးမယျ အိမျကို ဒုက်ခမပေးဘူး အမြားအားဖွငျ့ပေါ့ အငယျဆုံးလေးတှေ ဖွဈတိုငျး မိသားစုအပျေါ ကောငျးတယျခညျြးဆိုလိုတာမြိုးမဟုတျဘူး ယဘြေုယအားဖွငျ့ အငယျဆုံးလေးတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ မိသားစုအပျေါ ပိုပွီး တှယျတာတတျတာ မြိုးပါ
အငယျဆုံးဆိုတိုငျး အမြားထငျသလို ဦးစားပေးခံ အလိုလိုကျခံရတဲ့ လူတှခေညျြးမဟုတျပါဘူး အမွဲ အနောကျဆုံးမှာ ကနျြခဲ့တဲ့လူ ဒါမှမဟုတျ အနဈနာခံရတဲ့ သူတှခေညျြးဖွဈနတေတျပါတယျ
အငယ်က အငယ်နေရာနေဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြောစရာစကားတွေကို မြိုသိပ်ပစ်ရတာလဲ များပါတယ် အစစအရာရာ အရင်ဦးဆုံးရလိမ့်မယ်လို့ ထင်တတ်ကြတာ ကိုယ်ပူဆာခွင့်မရခဲ့တဲ့အရာတွေမှ အများကြီးပဲ အရာအားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်များများပါ
ပြီးတော့ . . . မိသားစုအပေါ် ပိုပြီးတွယ်တာတတ်တဲ့စိတ်လေး ပါလာတတ်ကြတယ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်နေတာတွေထက် မိသားစုကို ပိုပြီးငဲ့ကွက်တတ်ကြတယ် အငယ်ဆုံးဆိုတော့ အငယ်ဆုံးတွေရဲ့သဘာဝအတိုင်း အနည်းအကျဉ်းတော့ ဆိုးချင်ကြတာပေါ့
အဲ့တာ မတွယ်တာလို့မဟုတ်ဘူး ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ လိုချင်လို့ ရမလာတဲ့အခါ ဂရုစိုက်လေမလားလို့တွေးပြီး ဆိုးကြတာအိမ်တစ်အိမ်မှာ ရှိလေ့ရှိတဲ့ စုန်းပြူးလေးတွေက အငယ်ဆုံးလေးတွေကများတယ်
ဥပမာ – အစ်ကိုက ဆရာဝန် အမလဲ ဆရာဝန် အငယ်ဆုံးလေးတွေမှ အဝေးသင်တက်နေသလိုမျိုးတွေ တစ်မိပေါက် ထွန်းတာမျိုးတွေပေါ့ သာမန်အထင်တွေ အမြင်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါ အငယ်ဆုံးတွေက ပိုပြီးဆိုးတယ်လို့ တွေးတတ်ကြတယ်
နောက်ဆုံးမိသားစုအနားမှာ ကျန်ခဲ့တာကလဲ အငယ်ဆုံးလေးတွေပါပဲ ကြိုက်သလောက်ဆိုးချင်ဆိုးမယ် အိမ်ကို ဒုက္ခမပေးဘူး အများအားဖြင့်ပေါ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေ ဖြစ်တိုင်း မိသားစုအပေါ် ကောင်းတယ်ချည်းဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ယျေဘုယအားဖြင့် အငယ်ဆုံးလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ မိသားစုအပေါ် ပိုပြီး တွယ်တာတတ်တာ မျိုးပါ
အငယ်ဆုံးဆိုတိုင်း အများထင်သလို ဦးစားပေးခံ အလိုလိုက်ခံရတဲ့ လူတွေချည်းမဟုတ်ပါဘူး အမြဲ အနောက်ဆုံးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့လူ ဒါမှမဟုတ် အနစ်နာခံရတဲ့ သူတွေချည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်